Revision as of 09:20, February 13, 2020 (edit)
Harryhumper (Talk | contribs)
m (Harryhumper moved page Archer (Fate/Grand Order - Sei Shonagon) to Archer (Fate/Grand Order - Sei Shōnagon))
Revision as of 18:48, February 13, 2020 (edit)(undo)
ArcherSeiShōnagonStage1.jpg|Archer Stage 1 in ''[[Fate/Grand Order]]'', illustrated by [[Mika Pikazo]].
ArcherSeiShōnagonStage2.jpg|Archer Stage 2 in ''[[Fate/Grand Order]]'', illustrated by [[Mika Pikazo]].
ArcherSeiShōnagonStage3.jpg|Archer Stage 3 in ''[[Fate/Grand Order]]'', illustrated by [[Mika Pikazo]].
ArcherSeiShōnagonStage4.jpg|Archer Stage 4 in ''[[Fate/Grand Order]]'', illustrated by [[Mika Pikazo]].
ArcherSeiShōnagonStage1.png|Archer Stage 1 in ''[[Fate/Grand Order]]'', illustrated by [[Mika Pikazo]].
Revision as of 18:48, February 13, 2020